भारत भ्रमणमा राजेश हमाल ‘शो पिस’ मात्र | Daily State News
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:४७ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
अब राजदूत बन्न इच्छुक छन् हमाल !
दिल्लीमा त तपाईंलाई भारतको राजदूत बनाउन लागियो भन्ने चर्चा चल्यो नी भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘मेरो व्यक्तिगत इच्छा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पिताजीको लिगेसी पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर मलाई राजदूत बन्न कुनै झिनो प्रस्ताव पनि आएको छैन । मेरो भित्री इच्छा सोध्नुहुन्छ भने त्यो पाटो अंगाल्नै मन छैन चाहिँ भन्दिनँ ।
प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ । केही कुटनीति स्वभाविक रुपमा बुझेको छु, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार कुटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु ।’ राजदूत बन्ने प्रस्ताव आइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘हुन्न भन्न सक्दिनँ ।’-साभार:अनलाइन खबर बाट